အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: စတော်ဘယ်ရီ ထမင်းကြော်နဲ့ ပန်းပွင့်သုပ်
29 Responses to “စတော်ဘယ်ရီ ထမင်းကြော်နဲ့ ပန်းပွင့်သုပ်”
အစ်မချောရဲ့ စတော်ဘယ်ရီ ထမင်းကြော်လေး လာစားပါတယ်။ အစ်မက ထမင်းပာင်း ချက်ရင် စတော်ဘယ်ရီ တော်တော်ထည့်တယ်နော်။ ပိာုတစ်ခေါက်ကလည်း စတော်ဘယ်ရီ ပုဇွန်ကြော် ထင်တယ်။ ရို့စ် အတွက်တော့ အဆန်းဖြစ်နေတယ်။ ပန်းမုန်လာလို့ ခေါ်တာလား။ ရို့်စ်တို့တွေတော့ ပန်းဂေါ်ဖီလို့ ခေါ်တယ်။
စတော်ဘယ်ရီထည့်ပြီး မကြော်ဖူးဘူး.. ပန်းမုန်လာလည်း မသုပ်ဖူးဘူး.. ဟိဟိ.. အခု မမချောဆီက နည်းရပြီ.. ချစ်ချစ်က အခုပဲ လာကြည့်ရင်းနဲ့ ပြောသွားတယ်.. မမချောရဲ့  ပန်းမုန်လာသုပ် စားချင်တယ်တဲ့.. :)
အိပ်ခါနီးမှ လာဖတ်မိပြီး ရှလွတ်သွားတယ်။
ထမင်းကြော်ကို ပြင်ဆင်ထားတာ လှမှလှ။
နာနတ်သီးထည့်ကြော်တာတော့ ကြိုက်ဖူး သိလား။ ချိုတိုတိုနဲ့မို့။
စတော်ဘယ်ရီထည့်ကြော်တာတော့ မစားဖူးဘူး။ သူကတော့ ချဉ်တင်တင် မွှေးတေးတေး ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။
ဂေါ်ဖီပန်းသုပ်တော့ စိတ်ဝင်စားသား ... နောက်မှ စမ်းလုပ်ကြည့်အုံးမယ်။
ကိုမြကြီးလား ဘယ်သူလဲမသိဘူး ဆိုထားတဲ့ ဟိုသီချင်းလေး ဘာတဲ့... “ကိုယ့်အားနှိပ်စက်ကြသည်မို့ လားကွယ်... ” ငှယ်ငှယ် .... လို့ ပဲ အော်သွားအိ....
ဗိုက်ဆာနေတုန်း ဒီကိုရောက်လာလိုက်တာ ပိုဆာသွားတာပဲ... ခုချက်ပြထားတာ ၂ခုလုံး မဗေဒါ အကြိုက်တွေဖြစ်မယ်ထင်တယ်... တခါမှ မစားဖူးပင်မဲ့ အဲလိုမျိုးတွေဆို ကြိုက်တယ်...
ပန်ဂေါ်ဖီကို သုတ်စားလို့ရတာ မသိဘူး... ကြော်ပဲစားတတ်တာ... ခုတော့ တစ်မျိုးသိသွားလို့ မေမေကို စမ်းချက်ခိုင်းကြည့်မှပဲ... ဟိဟိ.... နောက်မို့ဆို ဒီဟင်းတွေချည်းထပ်နေတယ်...
ဒါနဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်ထားတာလဲ Quality ကောင်းလိုက်တာ... တကယ့် pro အတိုင်းပဲ... ဘာကင်မရာနဲ့ ရိုက်တာလဲဟင်... မချောကိုသာ အိမ်ခေါ်ထားလိုက်ချင်တယ်... နောက်တစ်ခါချက်လို့ရှိရင် မဗေဒါကို မချောအိမ်ခေါ်ထားလိုက်နော်.. စိတ်ဆိုးဘူး... ဟဲ. ဟဲ...
မစဉ်းစားနဲ့ ဒါနဲ့အလွမ်းဖြေနေတာမှလား :P
စားဖူးဘူးကွယ်။ ချဉ်တင်တင်ဆိုရင်တော့ ဟင့်အင်း
ပန်းမုန်လာသုပ်တော့ အကြိုက်ပေါ့ စားဖြစ်တယ်။
ရိုစ့် > ပန်းဂေါ်ဖီလည်းခေါ်ပါတယ်. အစ်မတို့ဘက်တော့ ပန်းမုန်လာ အခေါ်များလို့ အကျင့်ပါနေတား)
Sunny > ကောင်းကောင်းလုပ်ကျွေးလိုက်နော်း)
စူးနွယ်လေး> ပန်းမုန်လာသုပ်က စားကောင်းတယ်
မမေ > သုပ်စားကြည့်နော် အိပ်မက်ထဲတော့ ထည့်မမက်နဲ့
JUSTICE999BURMA >မနှိပ်စက်ပါဘူး နည်းနည်းပါးပါး သွားရေကျအောင် လုပ်တာပါး)
မဗေဒါလေး > ဓာတ်ပုံက ဖုန်းနဲ့ဘဲ ရိုက်တာပါ။ ကင်မရာသီးသန့်နဲ့ဟုတ်ဘူး Sony W 595ပါ။ နောက်တစ်ခါ ချက်ရင် ခေါ်လိုက်မယ် လာဖြစ်အောင်လာခဲ့နော်း)
Baby>> စတော်ဘယ်ရီပင်အောက်မှာ ပုရွက်ဆိတ်ကိုက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတော့ ဖြစ်နိုင်တယ်..း) ထမင်းကြော်က ချဉ်ဘူးအေ့ ချဉ်ချိုချိုလေး စားကောင်းတယ်..
ကြည့်ရတာ စားကောင်းမဲ့ပုံပဲ၊ ချက်ကြည့်အုံးမယ်
ဖြစ် မဖြစ်တော့ မသိဘူး မချောရေ ...
sunday special ပန်းမုန်လာသုပ် ကြိုက်တယ်၊ ပုဇွန်ခြောက်မှုန့်လဲပါတော့ သိပ်ကောင်းမှာပဲ၊ ပုဇွန်ခြောက်မှုန့်မရှိလို့ ... မေမေ၀ယ်ကျွေးနေကျ ပုဇွန်ခြောက်မှုန့် မွမွလေးတွေ သတိရလိုက်တာ၊ လဘက်လေးနဲ့စား သိပ်ကောင်း၊ မချော ထမင်းကြော်လည်းကြိုက်တယ်၊ စထရော်ဘယ်ရီသီးကို မကြိုက်ဘူး၊ ဖျော်သောက်တာပဲကြိုက်တယ်၊ ကြက်ဥဖြူဖြူကြော် လည်းကြိုက်တယ်၊
နောက် sunday မျှော်ရဦးတော့မည်၊
စတော်ဘယ်ရီထမင်းကြော်နဲ့ ပန်းပွင့်သုပ် လာစားတယ် မမချောရေ။ စတော်ဘယ်ရီ ထမင်းကြော်လေး က ပြင်ထားတာ လှလွန်းလို့ စားတောင် မစားရက်ဘူး။
မျက်လုံးနဲ့ကော ပါးစပ်နဲ့ကော အရမ်းစားလို့ကောင်းမယ့်ပုံပဲ လို့ တွေးနေမိတယ်။ အသစ်အဆန်းစားစရာလေးကို သိရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တယောက်တည်းကျတော့ ချက်စားရမှာ အဆင်မပြေဘူး.ပျင်းနေတာနဲ့..။
တခါမှအဲလိုထမင်းကြောင် မစားဘူးဘူး။ လုပ်တော့စားကြည့်ဦးမယ်..။
စားချင်စဖွယ်လေး ပြင်ဆင်ထားတာ လှလိုက်တာ
ပန်းပွင့်သုပ်က စားချင်စဖွယ်လေး ။ စတော်ဘယ်ရီ ထမင်းကြော်ကတော့ စတော်ဘယ်ရီသက်သက် ထမင်းကြော်သက်သက် ပိုကြိုက်မယ် ထင်တယ်း))
စားဖူးဖို့ နေနေသာ ခုမှပဲ ကြား..ကြားဖူးတော့တယ်
အမရေ ဗိုက်ဆာဆာနဲ့. . လာစားပါတယ် မှားပြီ. . . လာဖတ်ပါတယ် :)
်facebook မှာ​စားြ​ပီးြ​ပီ ဒီ​မှာေ​နာက်တေ​ခါက်ထပ်လာ
စား​တ​ယ် မမ :)
Urteter nuytre: http://lighriver.chez.com
ကိုယ်တို့က နောက်ဆုံးပိတ်မှာ အိပ်နဲ့ကျန်တာတွေ ထည့်ပြီး ပါဆယ်ယူသွားမလို့..။
စတော်ဘယ်ရီ ထမင်းကြော်လဲ စားသွားတယ်။
ပန်းဂေါ်ဖီသုပ် လဲ လွေးသွားတယ်။ အားရပါးရပဲ။
Sunday Special ကို Sunday အမီ လာရောက်စားသုံးသွားပါတယ်။ ထမင်းကိုတောင် ဒီလိုလှအောင်ပြင်တယ်ဆိုရင် လူဆိုရင်တော့ ဆိုဖွယ်ရာမရှိ.... :))
ရွှေချောဆီ မလာပါဘူး မန့်လဲ မမန့်ဘူး စားလဲ မစားဘူး တကယ် မစားရလို့
အညင်ကိုကတ်တယ် တကယ်ပဲ တကယ်လဲ မကျွေးဖဲနဲ့ လူကို သွားရည်ယိုအောင်လုပ်တယ် ကျင့်ပုတ် ဟွင့်
မလာဘူးနော် ရွှေချောအိမ်ကို တိတ်တိတ်လေးပြန်သွားတယ်သိလား ရွှေချော မသိလိုက်ဘူးမလား ဟင်းးး ဟင်းးးး
လာတာနောက်ကျသွားပြီ... သူများတွေစားလို့ ကုန်ပြီထင်ပါတယ် အစ်မချောရေ... ဗိုက်ထဲက ဂွီဂွီတောင်မြည်တယ်... သွားရည်ယိုလိုက်တာ...ထမင်းကြော်လေးက ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးပဲ.. ဂလု..ဂလု
လုပ်စားမယ် .....အဟုတ်..........ကျေးဇူးဘစ်ဘစ်နော် အမ
ဗိုက်ဆာနေချိန် မဆင်ခြင်ဘဲ ကြည့်လိုက်မိတယ်။
အော်အော် ... ဖြစ်ရလေကွယ် ဒီမျက်လုံး ကဲဟယ် .... ကဲဟယ် ဗိုက်ဆာချိန်မှ လာကြည့်မိသလား .... ဟွင့် မချောတို့နှိပ်စက် ချက်ကြောင့် သရေများကို သာတကွိကွိနှင့် မျိုချရင်း ဖတ်သွားပါကြောင်းးးး ဟွင့် မချောနော် ဂယ်ပဲ ဂယ်ပဲ ပန်းမုန်လာသုတ် ကိုပိုကြိုက်တယ် ဂယ်ပြောတာ ဟိဟိ